NETWORK CABINETS.19 ", China NETWORK CABINETS.19" Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Qingdao yakashandiswa photonic matekinoroji co., Ltd
Fiber Optic Coupler akateedzana
Nhoroondo ye WDM
Optical Fiber Chinja
FC fiber optic chinongedzo
SC internet optic connector
LC fiber optic chinongedzo
ST faibha optic chinongedzo
MU internet optic connector
E2000 fiber optic chinongedzo
MPO optic fiber chigamba
Isina mvura pigtail
Base chiteshi tambo
Yakasarudzika Splice Series
Fiber Optical 86-mhando Panel Bhokisi
Yakapetwa SC Kurumidza Kubatanidza
Optical Fiber Distribution Bhokisi
Imba>chigadzirwa>FTTH Series>Optical Fiber Distribution Bhokisi > Chigadzirwa chigadzirwa
Iyo 19-inch standard network kabati inogona kubatanidza nyore nyore, kugovera uye kuronga fiber-optic tambo, uye inogona kushandiswa kune yakazara kuiswa kweakasiyana michina. Inoshandiswa zvakanyanya mumakamuri eterevhizheni emakamuri, hukuru-hukuru hwekutsinhana, uye CATV fiber masystem.
Chigadzirwa Kutengesa Point
1.Network cabinet inofanirwa kunge iine anti-vibration, anti-kuvhunduka, anti-corrosion, guruva-chiratidzo, isina mvura, anti-radiation uye zvimwe zvinhu, kuitira kuti ive nechokwadi chekugadzikana uye kwakavimbika mashandiro emidziyo. Iyo network kabati inofanirwa kuve neusability yakanaka uye yekuchengetedza nzvimbo dzekuchengetedza kuti zvive nyore kushanda, kumisikidza uye kugadzirisa, uye ive nechokwadi cheanoshanda chengetedzo. Network makabati anofanirwa kuve nyore kugadzira, kuunganidza, komisheni, uye package. Network makabati anofanirwa kusangana nezvinodiwa zvekumisikidza, kuenzanisa uye kuita serialization. Iyo cabinet yakanaka pakuonekwa, inokodzera mukushandisa uye ruvara rwakarongedzwa.
2.Network cabinet inofanirwa kuve nehunyanzvi hwekuita. Maumbirwo edare remakurukota anoiswa pasi peakakosha dhizaini uye makemikari dhizaini zvinoenderana nemagetsi uye michina zvivakwa zvemidziyo uye zvinodiwa nenzvimbo yekushandisa kuverengera chimiro chekabati chine kuomarara uye simba, uye kusarudzika kwakanaka kwemagetsi , pasi, ruzha kupatsanurwa, kufefetedza uye kupisa kupisa. Kuita.
3.Network cabinet inonyanya kushandiswa kuchengetedza ma routers, switch, mafirita ekuparadzira uye zvimwe netiweki michina uye zvekushandisa. Iyo kudzika kazhinji kazhinji iri pasi pe800MM, hupamhi i600 uye 800MM. Musuwo wepamberi unowanzo kuve unopenya girazi musuwo, iro rine zvakaderera zvinodiwa pakupisa kupisa uye nharaunda.
1) Fiber kune chirongwa cheimba
2) Cable network network TV
4) Metropolitan nharaunda network
5) Mamwe masisitimu anoshamisa
Q1. Ndinogona here kuodha yemuenzaniso yechigadzirwa ichi?
A: Hongu, tinogamuchira shanduro yekuenzanisa kuongorora uye kutarisa hutano. Mixed samples inogamuchirwa.
Q2. Zvakadini nenguva inotungamirira?
A: Muenzaniso unoda 1-2 mazuva, nguva yekugadzirwa kwemazhinji inoda mavhiki 1-2.
Q3. Unotakura sei zvinhu uye zvinotora nguva yakareba sei kusvika?
A: Tinowanzoendesa neDHL, UPS, FedEx kana TNT. Inowanzoita mazuva 3-5 kuti asvike. Nhamba yemhepo uye kutengeswa kwegungwa zvakare kusarudza.
Q4: Unopa chivimbiso chezvinhu izvi here?
A: Ehe, isu tinopa 1-2 makore garandi kune edu epamutemo zvigadzirwa.
Q5: Ko nezve nguva yekuendesa?
A: 1) Masampuli: mukati mevhiki rimwe chete. 2) Zvinhu: Mazuva 15-20 kazhinji.
Kwete. 47 Tokyo Road, Mahara TradeZone, Qingdao, Shandong, China
+ 86-0532-86768576 （Zvakajairika）
Copyright © 2021 Qingdao Yakashandiswa Photonic technical Co. Ltd technical ne MEEALL Blog